Tomato Rascberry viscount: nkọwa nke ọtụtụ, àgwà. foto - Akwukwo nri - 2020
Nri ụtọ nke ndị ọrụ ugbo na tomato pickles "Viscount Crimson"
Na oge opupu ihe ubi, ndi oru ugbo na ndi oru ugbo na eji ngwa ngwa ime ihe nile. N'April, ịkwesịrị idozi olulu tomato ndị kachasị amasị gị, dozie greenhouses na ịhọrọ osisi dị elu.
Ndị na-emepụta ihe dị ukwuu na-echekwa ajụjụ siri ike: ụdị tomato a ga-akụ n'oge a, nke mere na ọ na-ewepụta ngwa ngwa na mkpụrụ osisi ahụ tọrọ ụtọ ma nwee ihe ngosi mara mma.
Anyị chọrọ ịgwa gị banyere ụdị tomato dị iche iche na-amasị, nke dị mfe ma bụrụ nke na-adịghị mma maka ịkọ ihe, a na-akpọ ya Crimson Vikonte tomato.
Tomato Raspberry Viscount: nkọwa dịgasị iche
Aha akara Viscount Crimson
Nkọwa zuru ezu Mmiri mbụ na-ekpebi tomato maka ịkụ mkpụrụ na greenhouses na oghe ala.
Na-agba Ụbọchị 90-105
Ụdị Mkpụrụ osisi gbara gburugburu, ọ dị ntakịrị
Agba Dark Crimson
Mkpụrụ dị arọ nke tomato 300 grams
Ngwa Ụdị dị iche iche
Kwe iche ruo na 15 n'arọ kwa square mita
Ọrịa ọrịa Na-eguzogide n'oge oyi
Mkpụrụ tomato dịgasị iche iche Crimson Vikonte bụ nke mbụ dị iche iche, site na ịkụ ihe na owuwe ihe ubi nke ụbọchị 90-105. Osisi ahụ bụ ọkọlọtọ, chọpụta, ohia na-eto obere, ọ bụghị ihe karịrị 55 cm. Ihe dị iche iche na-agụ ebe a.
Osisi dị ike na kọmpat, mana n'otu oge ahụ ọ na-enye nnukwu tomato, n'ihi ya, ị ga-elekọta ezigbo nkwado maka ịkekọta. Epupụta bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ gbara ọchịchịrị, obosara. Ọ na-etolite ma na akwa oghere, nakwa na greenhouses na greenhouses. Osisi ahụ nwere ezigbo nguzogide ọrịa ọrịa na ọrịa ọjọọ..
A na-emekarị ovary ahụ n'ụzọ dị mma, mkpụrụ osisi tozuru okè nwere ọdịdị dị elu, acha ọbara ọbara na-acha ọbara ọbara ma ọ bụ ụcha ọbara na-acha odo odo. Nri bụ utoojoo, na-emekarị ka tomato. Anụ anụ ahụ dị n 'ọnụ ọgụgụ dị elu, ọnụ ọgụgụ nke akụkụ nke 8-10, ihe akọrọ ihe dị n'ime 4.5%. Mkpụrụ nke mkpụrụ osisi ahụ dị oke: ruo 300 grams, mgbe ụfọdụ na-elekọta ya, tomato toro ruo 450 grams ma ọ bụ karịa.
Tebụl dị n'okpuru na-egosi maka iji tụnyere data gbasara mkpụrụ nke mkpụrụ osisi ndị ọzọ na tomato:
Viscount Crimson 300 grams
Abụba abụba 240-320 grams
Prime Minister 120-180 grams
Buying 100-180 grams
Ụyọkọ ụyọkọ 50-70 grams
Mkpụrụ vaịn 600-1000 grams
Amụma America 300-600 grams
President 250-300 grams
"Viscount Crimson" bụ onye nnọchiteanya nke Siberian nhọrọ. Nke a na-enweta tomato a site na ndị na-azụlite Russia na ọtụtụ natara nchịkwa ala n'afọ 2008.
Osisi Visconte Raspberry, bụ nke ntu oyi na ikuku na-ekpo ọkụ. Tomato na-enye ezigbo owuwe ihe ubi n'ebe ndịda, na etiti etiti na mpaghara ndị dị ala.
Na Voronezh, Astrakhan, Belgorod n'ógbè, na Crimea na n'ókèala dị na Krasnodar ọ ka mma ịkụnye na akwa oghere. N'ebe ndịda Urals na mpaghara dị n'ebe ugwu nke ihe ọkụkụ ahụ, ọ bụ nanị n'okpuru ụlọ ihe nkiri. Ọ dịkwa mkpa iburu n'uche na ụdị a chọrọ nkwado dị mma, ma ọ bụrụ na ọ gaghị enwe ezigbo njọ na mkpụrụ ga-ada.
Anyị na-enye gị ozi bara uru banyere isiokwu: otu esi akụ mkpụrụ tomato? Kedu ala dị mma maka na-eto eto na osisi ndị toro eto na greenhouses? Kedu ụdị ala dị?
Nakwa ndị na-akwado ndị na-eto eto, ndị na-egbu egbu na ụmụ ahụhụ maka nightshade.
Tomato Raska Vikonte zuru oke maka ụdị nchekwa na pickles. A na-ejikarị nri ọhụrụ, na vitamin salads. A na-ahapụ ya ka ọ jiri ya mee ihe. Mkpụrụ ahụ na-emepụta ihe ọṅụṅụ dị ụtọ na-atọ ụtọ na tomato ma na-acha ezigbo mmanụ.
N'ihe dị elu n'ọtụtụ dị elu, ọ ga-ekwe omume ịnakọta 5-6 n'arọ site na otu osisi toro eto. N'okpuru ezi ọnọdụ na ike nri, ọ ga-ekwe omume iji ruo 15 n'arọ kwa 1 sq.m. Nke a bụ ezigbo ihe kpatara osisi dị ala.
Na mkpụrụ nke iche iche ị pụrụ ịhụ na tebụl:
Viscount Crimson ruo na 15 n'arọ kwa square mita
Olya-la 20-22 n'arọ kwa square mita
Nastya 10-12 n'arọ kwa square mita
Banana uhie 3 n'arọ site na ohia
Gulliver 7 n'arọ site na ohia
Brown shuga 6-7 kg kwa square mita
Lady shedi 7.5 n'arọ kwa mita square
Rocket 6.5 n'arọ kwa square mita
Pink Lady 25 n'arọ kwa square mita
Foto a na - egosi tomato mkpanaka Crimson:
Tomato "Vikonte Crimson" nwere ọtụtụ uru:
na-enwu uto uto;
mkpụrụ osisi anaghị agbawa;
echekwara ogologo oge;
nwere ezi ahụ ike;
ịmị mkpụrụ tupu oge oyi;
anabata ntu oyi;
eji ogwu tomato eme ihe.
Ọghọm dị iche iche nke ụdị a:
adịghị anabata okpomọkụ na enweghi mmiri;
amanyere bụ iwu sturdy ndabere;
achọ ọkwa ala.
"Viscount Crimson" adịghị mma, na-anabata ntu oyi, mana anaghị anabata okpomọkụ. Ịgha mkpụrụ na seedlings kwesịrị ime na mbubreyo March na mmalite April. Na-emeghe n'ala mkpa ka a kụrụ na mbubreyo May - mmalite June.
Osisi kwesịrị ịmị ọkụ ugboro abụọ n'izu, na-ahọrọ ala ndị na-anọghị na ya. Ọ na-eme nke ọma na nri siri ike ma na-atọpụ.
Gụkwuo banyere nri maka tomato.:
Ngwakọta osisi, nke ịnweta ihe ndị nwere ike ịnweta, nke kachasị mma.
Yist, iodine, ash, hydrogen peroxide, amonia, boric acid.
Uwe elu maka seedlings, mgbe ị na-ebu, foliar.
Osisi ahụ nwere nkwarụ siri ike na mbubreyo na macrosporosis. Iji gbochie ọrịa fungal na rotting mkpụrụ osisi na ovaries nke griin haus, ọ dị mkpa ka ikuku na-adị mgbe niile ma nọgide na-enwe ezigbo ọkụ na ìhè na ha.
Na-agụ na weebụsaịtị anyị: ọrịa ndị a na-ahụkarị na tomato na greenhouses na ụzọ nke na-emeso ha, ndị dị elu na-ekwenye ekwenye na ọrịa na-eguzogide ọgwụ.
Alternaria, fusarium, verticillis, mbubreyo blight na nchebe site n'aka ya, iche iche na-adịghị n'okpuru mbubreyo blight.
Ngwongwo kachasị dị n'etiti nke ụdị a bụ moth, moth na sawflies, a na-ejikwa Lepidocide megide ha. Onye na - egwusi egwu na - emetụtakwa ụdị dịgasị iche iche a, a ghaghị iji ya mee ihe megide ọgwụ "Bison". N'ebe ndịda, Colorado nduku ebe kachasị njọ. Na-eji ya eme ihe "Prestige".
Ọ bụrụ na "Viscount Crimson" na-etolite na mbara ihu ahụ, mgbe ahụ enweghi nsogbu dị mkpa na ọrịa na pests.
"Ube Vikonte" - ezigbo ihe ubi, nke otutu ndi oru ubi huru. Ọ dị mfe na-eto eto ọbụna a novice tomato hụrụ. Ọ ga-adọrọ mmasị na ndị na-emepụta nnukwu ihe maka ọdịmma ya na ngosi nke mkpụrụ osisi. Jide n'aka na ị gha osisi ya na griin ha na mgbe ụbọchị 90 gasịrị, ị ga-enwe ezigbo mkpụrụ tomato mara mma. Nwere ezigbo oge!
N'ime okpokoro n'okpuru ị ga-ahụ njikọ dịgasị iche iche tomato dị iche iche dị iche iche:
Pink meaty Aja edo Pink eze F1
Obodo Titan Nne mama
Eze n'oge F1 oghere Kadinal
Uhie uhie Goldfish Ọrụ ebube Siberia
Union 8 Ntu ọka Na-ehicha
Red icicle De barao uhie Bells nke Russia
Mmanụ aṅụ Mmanụ aṅụ De barao nwa Leo Tolstoy